Kuwani waa 64 war ee iOS 11 kuu haayo | Wararka IPhone
Waxaan ogaaneynaa 64 qaababka ugu wanaagsan ee iOS 11
IOS 11 waxaa loo diyaariyey horumariyeyaasha Isniinta kadib soo bandhigii furay WWDC. Tan iyo markaas waanu tijaabinay oo layaabku way badnaayeen, badankooduna sifiican ayey u fiicnaayeen. Apple waxay ku dartay nidaamkeeda cusub tiro wanaagsan oo ugub ah kuwaas oo uusan sheegin wax hadal ah inta lagu gudajiray soo bandhigida, waxaana halkaan idin kugu soo gudbineynaa isku-darka dhammaan wixii aan awoodnay inaan helno maalmahan.
Xitaa ahaanshaha nooca beta-ga ugu horreeya, macruufka 11 wuxuu u shaqeeyaa si kafiican noocyo badan oo hore, oo leh degganaansho la yaab leh in la helo in lagu qaato afar maalmood oo la tiriyey innaga. Xitaa sidaas, khaladaadka iyo kuwa yar yar cayayaanka Waxay yihiin kuwo isdaba joog ah inta lagu jiro isticmaalka maalinlaha ah, taas oo aan caqabad ku ahayn in aan la dhex gelin dhammaan wixii ugu dambeeyay ee software-ka moobiilka ay ka bixiyaan xafiisyada Cupertino.
Qaar badan oo ka mid ah sheekooyinkaas cusub ma metelaan isbeddel xag-jir ah oo loogu talagalay nolosha dadka maalin walba, laakiin waxaa jira kuwa kale oo shaki la'aan ka dhigi doonaa dareemi horumar ka isticmaalka iPhone dhinacyada ugu badan ee maalinlaha ah. IOS 11 waxay ku xasuusataa dhowr arrimood oo ku saabsan iOS 7, nidaamka qalliinka ee ka gudbay 'skeumorphism' una beddelay 'design flat'. Maaha sababta oo ah waxay u taagan tahay isbeddel xag-jir ah oo xagga muuqaalka ah, laakiin sababta oo ah dhammaan dhinacyadaas yaryar ee nidaamka ee u muuqda inay dib uga soo laabteen xoqdo iyadoo isticmaalaha maskaxda lagu hayo, isku dayaya inay waxtar badan yeeshaan oo wax badan ku biiriyaan.
Cusub IOS 11 waxaa ka buuxa wararkaas yar ee kaa dhigaya inaad mar labaad rabto iPhone-ka oo aad ku tijaabiso sida ugu buuxda, in kasta oo ay run tahay inay jiraan waxyaabo badan oo wax loo dhimayo iyo in badan oo la safeeyo. Laakiin waxaad ku bilaabaneysaa wax, walina waxaa jira bilooyin yar oo qiimo leh oo ka haray illaa iyo inta laga siinayo dadweynaha guud bisha Sebtember si loo wanaajiyo, loo hagaajiyo loona wanaajiyo mar kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 11 » Waxaan ogaaneynaa 64 qaababka ugu wanaagsan ee iOS 11
Salaan ... su'aal ... sidee tahay inaad horeyba u isticmaaleyso 11 hadaan betasku wali gaarin? Waxaan ka mid ahay betas 11-ka wali lama heli karo illaa iyo hadda waxaan joogaa 10.3.3 ...
Oh jidka aad ku jirto ee aad iga ogtahay aniga oo ah wax kasta oo ku dhaca tufaaxa ... ma runbaa in xabsiga loo taxaabi doono 11-ka ama illaa iyo hadda xanta saafiga ah? Waad ku mahadsantahay inaad nala socodsiiso !!
Ka jawaab ADV
Waa salaaman tahay, aad ayey u wanaagsan tahay, noocyada ugu horreeya waxaa loo diraa kuwa wax dhisa mana wada diraan hal mar, waxaa lagu diraa mowjado. PS: Waan ku qaldanaa inaan kuu jawaabo waxaana ugu jawaabay Abelgg xD.
Hahaha waad ku mahadsantahay walwal walaaca iyo jawaabta ... waan hubinayay taas laakiin kuwa horumariya waa inay bixiyaan akoon horumarineed 99 doolar ... heck fiican waxaan sugaa betas in la sii daayo haha ​​... mar labaad mahadsanid nala socodsiinaya ...
Waa salaaman tahay! Waxaan kuugu hambalyeynayaa fiidiyowga, maxaa yeelay in badan oo iyaga ka mid ah laguma sharxin ama laguma sharraxin kanaalada rasmiga ah ee Apple.
Ma ku guulaysatay inaad dhaqaajiso «ha dhibin intaad gaadhiga wadid»?
Waad salaaman tihiin, aad beey u wanaagsan yihiin, noocyadii ugu horeeyey waxaa loo diraa kuwa wax dhisaya mana wada diraan halmar, waxaa loo diraa mowjado waves
cidina faallo kama bixin labadan
Waxaan u galiyay macruuf iyagaana iga indha tiray 😀
lagu tijaabiyey ipad mini 2
- isku xirka safari. taabashada xiriirka labada farood wuxuu ku furayaa tab cusub (markasta sax maahan)
- farta ku hay isku xidhka oo jiid. Waan u qaadan karaa barta cinwaanka iyo hubaashii inaan kala qaybiyo aragtida laakiin ma tijaabin karo
- boostada waxaad ku jiidan kartaa feyl ku lifaaqan farriin furan oo ka kooban halabuur cusub (ku sii daa haynta hoose ee shaashadda oo raadinaya feyl warqad kale oo la helay)
IOS 11 waxay umuuqataa inay hirgalisay "walxaha OLE" ee Windows 95 kusoo bandhigay desktop-ka. Jiid oo tuur
Ku jawaab psycho_pata
Marka waxaan la wadaagi karnaa kaydinta iCloud ee iOS 11
Sida loo duubo shaashaddaada iPhone